စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo) မအိုသေးဘူး
15 Feb 2018 . 8:03 AM
စီရော်နယ်လ်ဒို၊ ချန်ပီယံလိဂ်ဆို သွင်းဂိုးပိုးမွှားတွေ အသည်းအသန်ကိုက်ခဲတတ်သူမျးလား။ PSG နဲ့ပွဲမတိုင်မီ ဆိုစီဒက်နဲ့ လာလီဂါပွဲမှာ ဟက်ထရစ်သွင်းပြီး သူ့ရဲ့ ဂိုးဆာလောင်စိတ်ကို စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo) နှိုးဆွခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီဆာလောင်စိတ်ဟာ PSG နဲ့ပွဲအထိ အမျှင်တန်းခဲ့တယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)က အရေးပါတဲ့ ချေပဂိုးကို ပယ်နယ်တီကနေ သွင်းယူလိုက်တယ်။ အငြင်းပွားဖွယ်ပယ်နယ်တီဖြစ်ခဲ့လို့ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)အတွက် ဂုဏ်ယူစရာသိပ်မကောင်းဘူးပဲထားပါ၊ ရီးယဲလ်ရဲ့ အောင်ပွဲကို စတင်ဖို့အတွက် စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)က အနိုင်ဂိုးသွင်းပေးလိုက်ပြန်တယ်။ ဒီဂိုးနှစ်ဂိုးကြောင့် စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးဟာ (၁၀၁)ဂိုးရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒါဟာ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းတစ်လျှောက် အသင်းတစ်သင်းတည်းနဲ့အတူ ဂိုးရာပြည့်ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖြစ် စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ကို မှတ်တမ်းဝင်စေတယ်။ ဒါတင်မကသေးဘူး။ ချန်ပီယံလိဂ် (၇)ရာသီဆက် (၁၀)ဂိုးနဲ့အထက်သွင်းယူနိုင်တဲ့ စံချိန်ကိုလည်း စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြန်တယ်။
ချန်ပီယံလိဂ်နောက်ဆုံး (၁၂)ပွဲမှာ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)က (၂၁)ဂိုးအထိ သွင်းယူထားတယ်။ သူ့ရဲ့ မဟာပြိုင်ဘက်မက်ဆီ(Messi)ကလွဲလို့ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ အသင်းတစ်သင်းတည်းအတွက် ချန်ပီယံလိဂ်ရာပြည့်ဂိုးကျော်လွန်တဲ့ စံချိန်ကို လိုက်မီနိုင်မယ့်သူမရှိတော့ဘူး။ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလ်အသင်းကစားသမားဘ၀ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးတွေကို ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကြည့်လိုက်ပါတယ်။
စီရော်နယ်လ်ဒို(C.Ronaldo)ရဲ့ ရာသီအလိုက်ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးပြ ဂရပ်ဖ်
စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo) ၁၀၁ ဂိုး
မက်ဆီ (Messi) ၉၇ ဂိုး
ရာအူးလ်( Raul) ၆၆ဂိုး
စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ ရာသီအလိုက်သွင်းဂိုးများ
၂၀၀၉-၁၀ (၇)ဂိုး၊ ၂၀၁၀-၁၁ (၆) ဂိုး၊ ၂၀၁၁-၁၂ (၁၁)ဂိုး၊ ၂၀၁၂-၁၃ (၁၂) ဂိုး၊ ၂၀၁၃-၁၄ (၁၇)ဂိုး၊
၂၀၁၄-၁၅ (၁၀)ဂိုး၊ ၂၀၁၅-၁၆ (၁၆) ဂိုး၊ ၂၀၁၆-၁၇ (၁၂)ဂိုး၊ ၂၀၁၇-၁၈ (၁၁)ဂိုး
စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ဟာ ချန်ပီယံလိဂ်သမိုင်းမှာ ဂိုးသွင်းဘုရင်ဆုကို (၆)ကြိမ်ရထားပြီး စံချိန်တင်ထားပါတယ်။ ပြီးတော့ ချန်ပီယံလိဂ်အုပ်စုအဆင့်မှာ တစ်ရာသီအတွင်း ဂိုးအများဆုံးသွင်းယူသူအဖြစ် သွင်းဂိုး (၁၁)ဂိုးနဲ့ စံချိန်တင်ထားတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo) ဟာချန်ပီယံလိဂ်မှာ သူရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတွေရဲ့ (၈၇)ရာခိုင်နှုန်းကို ဂိုးသွင်းခဲ့ဖူးပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ဟာ ဂိုးဧရိယာထဲက သွင်းဂိုးမုဆိုးပါပဲ။ ရီးယဲလ်အတွက် သူသွင်းယူခဲ့တဲ့ ချန်ပီယံလိဂ် (၁၀၁)ဂိုးမှာ ဂိုးဧရိယာထဲကနေ သွင်းယူမှု (၈၆)ကြိမ်အထိရှိခဲ့ပြီး ဂိုးဧရိယာပြင်ပသွင်းဂိုး (၁၅)ဂိုးသာရှိခဲ့ပါတယ်။ ခေါင်းတိုက်ဂိုး (၁၃)ဂိုး၊ ညာခြေကန်ချက်သွင်းဂိုး (၇၁)ဂိုးနဲ့ ဘယ်ခြေကန်ချက်သွင်းဂိုး (၁၇)ဂိုးဆိုပြီး အနုစိတ်ထပ်ခွဲကြည့်လို့ရပါတယ်။ စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလ်ကစားသမားဘ၀ ချန်ပီယံလိဂ်သွင်းဂိုးများနောက်ကွယ်မှာ ဖန်တီးပေးနေသူတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီထဲမှာမှ ဘန်ဇီမာ (Benzema) ကဂိုးဖန်တီးမှု (၁၁)ကြိမ်နဲ့ အများဆုံးပါပဲ။. သူ့နောက်မှာ ဘေးလ် (Bale) (၇)ကြိမ်၊ မာဆယ်လို (Marcelo) (၆)ကြိမ်ဆိုပြီးရှိနေပါတယ်။
တကယ်ဆို စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)ဟာ ဒီရာသီမှာ ဂိုးတွေသွင်းနိုင်ဖို့ ရုန်းကန်နေရ၊ လာလီဂါမှာစံချိန်တင်ဂိုးပေါက်ပျောက်ဆုံးမှုတွေကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ချန်ပီယံလိဂ်မှာ အစွမ်းကုန်လင်းလက်နေဆဲပဲ။ အသက် (၃၀)ကျော်အရွယ်ကစားသမားတစ်ဦးအတွက် နေ၀င်ချိန်နိမိတ်တချို့ပြသနေပေမယ့် စီရော်နယ်လ်ဒို (C. Ronaldo)က ချန်ပီယံလိဂ်မှာ စံချိန်တင်ဂိုးတွေသွင်းပြရင်း မအိုသေးဘူးလို့ ကြွေးကြော်နေတယ်။
စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo) မအိုသေးဘူး
စီရျောနယျလျဒို၊ ခနျြပီယံလိဂျဆို သှငျးဂိုးပိုးမှားတှေ အသညျးအသနျကိုကျခဲတတျသူမြးလား။ PSG နဲ့ပှဲမတိုငျမီ ဆိုစီဒကျနဲ့ လာလီဂါပှဲမှာ ဟကျထရဈသှငျးပွီး သူ့ရဲ့ ဂိုးဆာလောငျစိတျကို စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo) နှိုးဆှခဲ့ပါတယျ။ အဲဒီဆာလောငျစိတျဟာ PSG နဲ့ပှဲအထိ အမြှငျတနျးခဲ့တယျ။ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)က အရေးပါတဲ့ ခပြေဂိုးကို ပယျနယျတီကနေ သှငျးယူလိုကျတယျ။ အငွငျးပှားဖှယျပယျနယျတီဖွဈခဲ့လို့ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)အတှကျ ဂုဏျယူစရာသိပျမကောငျးဘူးပဲထားပါ၊ ရီးယဲလျရဲ့ အောငျပှဲကို စတငျဖို့အတှကျ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)က အနိုငျဂိုးသှငျးပေးလိုကျပွနျတယျ။ ဒီဂိုးနှဈဂိုးကွောငျ့ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးဟာ (၁၀၁)ဂိုးရှိခဲ့ပါပွီ။ ဒါဟာ ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးတဈလြှောကျ အသငျးတဈသငျးတညျးနဲ့အတူ ဂိုးရာပွညျ့ခဲ့တဲ့ ပထမဆုံးကစားသမားအဖွဈ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ကို မှတျတမျးဝငျစတေယျ။ ဒါတငျမကသေးဘူး။ ခနျြပီယံလိဂျ (၇)ရာသီဆကျ (၁၀)ဂိုးနဲ့အထကျသှငျးယူနိုငျတဲ့ စံခြိနျကိုလညျး စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ပိုငျဆိုငျခဲ့ပွနျတယျ။
ခနျြပီယံလိဂျနောကျဆုံး (၁၂)ပှဲမှာ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)က (၂၁)ဂိုးအထိ သှငျးယူထားတယျ။ သူ့ရဲ့ မဟာပွိုငျဘကျမကျဆီ(Messi)ကလှဲလို့ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ အသငျးတဈသငျးတညျးအတှကျ ခနျြပီယံလိဂျရာပွညျ့ဂိုးကြျောလှနျတဲ့ စံခြိနျကို လိုကျမီနိုငျမယျ့သူမရှိတော့ဘူး။ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလျအသငျးကစားသမားဘ၀ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးတှကေို ခှဲခွမျးစိတျဖွာကွညျ့လိုကျပါတယျ။
စီရျောနယျလျဒို(C.Ronaldo)ရဲ့ ရာသီအလိုကျခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးပွ ဂရပျဖျ
စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo) ၁၀၁ ဂိုး
မကျဆီ (Messi) ၉၇ ဂိုး
ရာအူးလျ( Raul) ၆၆ဂိုး
စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ ရာသီအလိုကျသှငျးဂိုးမြား
စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ဟာ ခနျြပီယံလိဂျသမိုငျးမှာ ဂိုးသှငျးဘုရငျဆုကို (၆)ကွိမျရထားပွီး စံခြိနျတငျထားပါတယျ။ ပွီးတော့ ခနျြပီယံလိဂျအုပျစုအဆငျ့မှာ တဈရာသီအတှငျး ဂိုးအမြားဆုံးသှငျးယူသူအဖွဈ သှငျးဂိုး (၁၁)ဂိုးနဲ့ စံခြိနျတငျထားတယျ။ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo) ဟာခနျြပီယံလိဂျမှာ သူရငျဆိုငျခဲ့တဲ့အသငျးတှရေဲ့ (၈၇)ရာခိုငျနှုနျးကို ဂိုးသှငျးခဲ့ဖူးပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ဟာ ဂိုးဧရိယာထဲက သှငျးဂိုးမုဆိုးပါပဲ။ ရီးယဲလျအတှကျ သူသှငျးယူခဲ့တဲ့ ခနျြပီယံလိဂျ (၁၀၁)ဂိုးမှာ ဂိုးဧရိယာထဲကနေ သှငျးယူမှု (၈၆)ကွိမျအထိရှိခဲ့ပွီး ဂိုးဧရိယာပွငျပသှငျးဂိုး (၁၅)ဂိုးသာရှိခဲ့ပါတယျ။ ခေါငျးတိုကျဂိုး (၁၃)ဂိုး၊ ညာခွကေနျခကျြသှငျးဂိုး (၇၁)ဂိုးနဲ့ ဘယျခွကေနျခကျြသှငျးဂိုး (၁၇)ဂိုးဆိုပွီး အနုစိတျထပျခှဲကွညျ့လို့ရပါတယျ။ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ရဲ့ ရီးယဲလျကစားသမားဘ၀ ခနျြပီယံလိဂျသှငျးဂိုးမြားနောကျကှယျမှာ ဖနျတီးပေးနသေူတှအေမြားကွီးရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီထဲမှာမှ ဘနျဇီမာ (Benzema) ကဂိုးဖနျတီးမှု (၁၁)ကွိမျနဲ့ အမြားဆုံးပါပဲ။. သူ့နောကျမှာ ဘေးလျ (Bale) (၇)ကွိမျ၊ မာဆယျလို (Marcelo) (၆)ကွိမျဆိုပွီးရှိနပေါတယျ။
တကယျဆို စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)ဟာ ဒီရာသီမှာ ဂိုးတှသှေငျးနိုငျဖို့ ရုနျးကနျနရေ၊ လာလီဂါမှာစံခြိနျတငျဂိုးပေါကျပြောကျဆုံးမှုတှကေို ရငျဆိုငျခဲ့ရပမေယျ့ ခနျြပီယံလိဂျမှာ အစှမျးကုနျလငျးလကျနဆေဲပဲ။ အသကျ (၃၀)ကြျောအရှယျကစားသမားတဈဦးအတှကျ နဝေငျခြိနျနိမိတျတခြို့ပွသနပေမေယျ့ စီရျောနယျလျဒို (C. Ronaldo)က ခနျြပီယံလိဂျမှာ စံခြိနျတငျဂိုးတှသှေငျးပွရငျး မအိုသေးဘူးလို့ ကွှေးကွျောနတေယျ။